श्रीकृष्णको सम्झनामा भा”इरल जडीले राखे छोरीको नाम “श्री” (भिडियो सहित) - Onlines Time
श्रीकृष्णको सम्झनामा भा”इरल जडीले राखे छोरीको नाम “श्री” (भिडियो सहित)
December 17, 2020 December 17, 2020 by onlinestime
पछिल्लो समय टिकटकमा निकै नै भाइरल भएका जोडी हुन सुधीर श्रेष्ठ र रोशनी श्रेष्ठ ।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठको फिल्म कोहिनुरको गीतहरूमा टिकटिकमा भाइरल बनेका जोडी अहिले म्युजिक भिडियो मा समेत छएका छ्न । पछिल्लो समयमा उनीहरूको छोरी भएको छ । उक्त कुरा सुधिरले सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी गराएका हुन । अहिले उनिहरुलाई सामाजिक संजालमा शुभकामना दिनेको ओइरो लागेको छ । हाम्रो तर्फबाट पनि सुधीर र रोशनीलाई शुभकामना छ । जीन्दगीमा अझै प्रगति गर्दै जानू ।
छोरी जन्माएपछी निकै नै खुसी देखिएका जोडि अहिले छोरीको नाम पनि श्रीकृष्णकै नामबाट राखेका छ्न । सुधीरले एक अन्तरवार्तामा बताएअनुसार सुधीरले छोरीको नाम “श्री” राखेका छ्न । जुन भिडियो हामिले तल पनि राखेका छौ ।
पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा रुचाईएको एउटा नाम हो सुधीर श्रेष्ठ । उनले पछिल्लो समय निकै नै हिट म्युजिक भिडियो दिइरहेका छ्न । उनका “नबोली बनोली”, “मायाँ गरौंला” जस्ता गीतलाई दर्शकले निकै नै रुचाएका छन ।श्रेष्ठ दम्पतीले यसअघि ‘जेल पनि सहुँला’ बोलको गीतमा टिकटक बनाएका थिए । १५ सेकेन्डको समयावधिमा यी दुईले प्रस्तुत गरेको अभिनय, हाउभाउ र कन्सेप्टलाई रुचाउने बढे । ‘के म तिम्रो होइन र’ मा टिकटक बनाउँदा सुधीरको फलोअर्स १७ हजार जनाभन्दा बढी थिए । अहिले उनलाई फलो गर्ने ५ लाख १० हजार छन् । सुधीर पनि आइरहेको टिकटक भिडियोभन्दा केही फरक कन्सेप्टको भिडियो बनाउँदा टिकटकमा रुचाएको बताउँछन् । ‘
अभिनेत्री श्वेता खड्का विवाह बन्धनमा बाँधिएकि छन् । उनी धनगढीका विजयेन्द्र सिंह रावतसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकि हुन् । उनको विवाह काठमाडौँस्थित गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा भएको थियो।
उनले यसअघि वि.सं २०७१ साल असार २३ गते अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी थिइन् । बिहे भएको करिब एक महिनापछि श्रीकृष्णको नि´धन भएको थियो ।
यति नै बेला गायक बद्री पंगेनीले भने आफ्नो पुरानो गीत ‘लाउ चेली सिन्दुर लाउ, निको पार हृद’यको घाउ’ सम्झिए र फेसबुकमा स्वेताको नवजोडीलाई शुभ’कामना दिए । बुधबार हाम्रो कला टिभी’सँगको कुराकानी पनि बद्रीले स्वेताको नाममा गीत गाउँदै सोही कुरा दोहोराए । स्वेताको बिहेमाथि प्रश्न उठाउ’नेलाई समेत उनले पितृसत्तात्मक मानसिकताको उपज रहेको टिप्प’णी गरे ।
सँगसँगै माइति’घरमा उखु किसानको आन्दोलन चलिरहेका बेला राजनतिक दल र सरकारले देखाएको बेवा’स्ताको विरोध गर्दै आग्रह गरे, ‘उखु किसानको आँशु सरका’रले चाँडो भन्दा चाँडो पु’छिदियोस् ।’बाँकी के–के भयो, भिडियोमा हेर्नुस् पुरा कुराकानी ।
Prevनेपालमा पनि टिकटक बन्द हुने सभावना ! उजुरी दिनेको संख्या अत्याधिक बढे ( टिकटको बन्द हुनु ठिक कि बेठिक ? )
Nextविबाहकै दिन बेहुली छतबाट खसेर मेरुदण्ड नै भाँचियो, बेहुली लिन आएका बेहुलाले अस्पतालकै बेडमा नै सिन्दर भरे